स्वस्तिमाको बढ्दो व्यस्तता, कत्तिको लाग्ला लक ? « Ramailo छ
स्वस्तिमाको बढ्दो व्यस्तता, कत्तिको लाग्ला लक ?
प्रकाशित मिति : Jul 25, 2018
नायिका स्वस्तिमा खड्का यो वर्ष व्यस्त बनेकी छन् । प्रदर्शन र छायाँकनका हिसाबले स्वस्तिमाको हातमा करिब आधा दर्जन छन् । फिल्मसँगै देश तथा विदेशका कार्यक्रममा पनि स्वस्तिमाको व्यस्तता बढ्दो छ । कार्यक्रमकै सिलसिलामा स्वस्तिमा बुधबार मात्रै अष्ट्रेलिया उडेकी छन् ।
फिल्मको हिसाबले स्वस्तिमा अभिनित फिल्म ‘नाईं नभन्नू ल ५’ भदौ ८ गते प्रदर्शनमा आउँदैछ । प्रोमो र गीत रिलिज गरिएको विकास आचार्य निर्देशित फिल्मको प्रचार प्रारम्भ भैसकेको छ । मल्टिस्टारर फिल्ममा स्वस्तिमा कति नोटिस हुन्छिन् ? त्यो भने ‘नाईं नभन्नू ल ५’ रिलिज पछि नै थाहा हुनेछ ।
दशैंमा स्वस्तिमा अभिनित दुई फिल्म ‘छक्का पञ्जा ३’ र ‘जय भोले’ एकसाथ प्रदर्शन हुने चर्चा छ । तर ‘छक्का पञ्जा ३’ मा स्वस्तिमाको एउटा मात्रै गीत छ भने ‘जय भोले’ मा उनी सोलो हिरोइनको रुपमा प्रस्तुत भएकी छन् । स्वस्तिमाको लागि ‘जय भोले’ चलिदिनु पर्नेछ । स्वस्तिमा र बुलबुल का नायक उज्वल अधिकारीसँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :
महिला टेम्पो चालकको कथामा बनेको फिल्म ‘बुलबुल’मा स्वस्तिमा मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत भएकी छन् । यही महिना ‘बुलबुल’को छायाँकन सुरु हुनेछ । यी सँगै स्वस्तिमा अन्य फिल्ममा पनि अनुबन्धित हुने चर्चा छ भने ‘दुई रुपैयाँ’ टिमले निर्माण गर्ने ‘डामाडोल’मा पनि स्वस्तिमा एउटा गीतमा हुनेछिन् ।
सरसर्ती हेर्दा स्वस्तिमा यो वर्ष निकै व्यस्त देखिएकी छन् । डेव्यु फिल्म ‘होस्टेल रिटन्र्स’ सहित ‘लभ लभ लभ’ र ‘छक्का पञ्जा २’ गरी तीन फिल्म मात्रै सार्वजनिक भएका छन् । थोरै फिल्म रिलिज भएर पनि व्यस्त भएकी स्वस्तिमालाई यो वर्ष चाहिं कत्तिको लाग्ला त लक ?